Isbeddellada & raadinta maqaalada mawduuca:anaga
Kalifoorniya ayaa dib loo furay, waa calaamad muhiim ah oo soo kabashada wadajirka ah
Gobolka ugu dadka badan Mareykanka wuxuu qaaday inta badan xayiraadaha Covid laakiin wali wuxuu siyaasad ahaan ku kala qeybsan yahay inay sida ugu dhaqso badan sameyn laheyd iyo in kale.
Maamulka Biden ayaa soo bandhigay qorshe lagula dagaalamayo argagixisada gudaha
Shan bilood ka dib weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka Mareykanka, maamulka Biden wuxuu daaha ka qaadi doonaa talaabooyin cusub oo lagula tacaalayo "halista sare" ee ka imaaneysa argagixisada gudaha Talaadada, laakiin ma dooneyno - hadda - inay sharci ka hortagto hanjabaadaha maxalliga ah.
Sharaxaad: Kaliforniya ayaa dib loo furey, inta badan, Talaadada
Kalifoorniya waxay sheegaysaa inay furayso xayiraadaha COVID-19 Talaadada, laakiin shirkadaha tiknoolajiyada iyo xafiisyada kale si dhaqso ah uma beddelaan Disneyland, jimicsiyada iyo dukaamada.
Houston Methodist: Xaakimku wuxuu xukumaa isbitaalka dacwad ka dhan ah tallaalka khasabka ah ee loo yaqaan 'covid-19' ee shaqaalaha
"Dacwad-oogayaashu ma ahan oo keliya inay khatar gelinayaan caafimaadkooda; waxay khatar gelinayaan caafimaadka dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha, shaqaalaha taageerada, bukaannada iyo qoysaskooda, " ayuu yiri garsoore. Qofka cabashada weyn leh “wuxuu si xor ah u dooran karaa inuu aqbalo ama diido tal
Toogashada goobta lagu caweeyo ee Pulse: qaanso roobaad ayaa ka kor kacay xusuusta sannad-guuradii shanaad
Calaamadda rajada oo u eg qaabka qaanso-roobaadka ayaa ka soo muuqatay xaflad xusuus ah oo lagu sharfayo 49 qof ee naftooda ku waayey toogashadii ballaadhnayd ee ka dhacday caweyska Pulse ee magaalada Orlando, Florida, shan sano ka hor.